Izixhobo zabavelisi kunye nabaxhasi - Umzi mveliso weZinto zase China
I-aluminium eqinisiweyo ibhegi yefoyile yealuminium ingxowa enokuthi yenziwe inokupakisha ibhegi yokupakisha iti ibhegi yokupakisha ingxowa yealuminium
I-Clo65d ifilimu ye-aluminium emsulwa sisithintelo esine-multilayer ephezulu kunye nezinto ezinganyangekiyo ezenziwe yimpahla. Imveliso inezi zinto zilandelayo: imbonakalo emhlophe yesilivere, i-opaque, iyabonakalisa, iipropathi zoomatshini ezomeleleyo, ukusebenza okuphezulu kokuqhumisa, ukungasebenzi kwe-anti punct, i-anti-static, njl.
3 G 5 g 10 g 100 g silica gel ngaphaya granule desiccant
Ukhuseleko High akukho umhlwa. Kufanelekile ukuba kungabikho uthuli kwaye kungabikho static. Iimveliso ziyahlangabezana nomgangatho wase-US wasemil-d-3464e, olukhetho olufanelekileyo kumzi mveliso weemiconductor kunye nemicroelectronics. Ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
Nylon ibhegi ezincamathelayo indawo elubala irayisi ukutya zeplastiki ibhegi kugcinwa ngokutsha ingxowa yeplastikhi yeplastikhi inokwenziwa
Fh001 wenayiloni ezincamathelayo ibhegi ifilimu luhlobo lwezinto ezidityanisiweyo ezidityaniswe yi-Biaxial eqine BOPA ifilimu kunye CPE ifilimu ngenkqubo eyomileyo edityanisiweyo. Yeyona nto vacuum esetyenziswa kakhulu China. Le mveliso ine-anti-static function, isiphumo esihle sokufuduka, ukucaca okuphezulu, ukungena kweoksijini ephantsi, ukusebenza kakuhle kobungqina bokufuma, amandla aphezulu okuqina kunye nokumelana nokugqobhoza, ukutywina ubushushu ngokulula, ukutywina okuhle kunye nokumelana nokuguga.
Ibhola yefilimu ebomvu ye-antistatic bubble bhanyabhanya ethengisa ngokubanzi iglasi yefilimu eyoyikisayo enganyangekiyo yefilimu yomzi mveliso ngokuthe ngqo
I-anti-static bubble ibhegi edityanisiweyo ephuhliswe yinkampani yethu izalisa iziphene zebhegi yokulwa i-static yasekhaya (iibhegi ezininzi ze-anti-static zeblue azidibaniswanga, kulula ukuvuza emva kwexesha elide, kunye nokusebenza okungafunekiyo kwe-anti-static lihlwempu). Imveliso inesakhiwo esimbaleko emibini: ifilimu yangaphandle ye-PE, ixabiso lokumelana nomphezulu yi-108 ~ 1010'Ω, umaleko wangaphakathi we-anti-static bubble bag, ixabiso lokumelana nomphezulu li-108 ~ 1010'Ω.
Ingubo ebomvu yeBhola, Umatshini weMask yobuso, Umenzi weMaski, Ilaphu leBlue Static Bubble, Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye, Ukupakisha i-Bubble Bag,